Kala soo bax Sawirka Muuqaalka Muuqaalka YouTube-ka ee YouTube-ka - Taageer shabakadaha badankood
Kala soo bax Sawirka Muuqaalka Muuqaalka YouTube-ka ee YouTube-ka
❤ Kala soo bixi dhammaan sawirrada thumbnail ee fiidiyow kasta oo YouTube ah qalabkan fudud.
Si aad u hesho fiidiyowga fiidiyowga ah ee fiidiyow kasta oo YouTube ah gali URL-ga caadiga ah ee fiidiyowga sanduuqa qoraalka hoose.
⚠ URLkaagu waa inuu u egyahay sidan:
Hel YouTube thumbnail
Goobtani waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo dejiso tigidhada muuqaal kasta oo YouTube ah adiga oo galaya URL-ga fiidiyaha.
⚠ Badhanka Bookmark wuxuu leeyahay nooc cusub. Cusboonaysii hadda.
⚠ Shabakadaha bulshada qaarkood waxay ubaahanyihiin inay dib uqabtaan bogga aad hada daawaneyso si aad thumbnail sax ah u hesho.
✚ Kudar Soojeedinta
❝Kordhinta aragtiyada fiidiyowyada adigoo ku daraya talooyin❞
☀ Thumbnail Grabber wuxuu taageeraa soo dejinta thumbnails ka Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop iyo inbadan. ☁
Maxaad u doorataa qalabkan xarrago leh?
Degdeg ah oo bilaash ah xanaaqna ma leh
Aalado dheeraad ah oo dheeri ah
Naqshadeynta casriga ah
Taageer shabakadaha badankood
❝Liiska sawirka waxaa kaliya lagu keydiyaa qalabkaaga❞
♻ Taariikhda nadiifi
Guji badhanka soo-jeedinta si aad u hesho fikrado fiican.
Haddii la isticmaalayo Mac OS X
Soo Bixi Bogga Youtube
Kusoo hel dhamaan sawirada fiidiyowga YouTube hal guji.
Hel Thumbnail 2.0 ← U jiid tan meesha galka fariimahaaga
❝Qoraalkani wuxuu ka soo saari karaa dhejiska fiidiyowga barta internetka.❞
Sida loo isticmaalo YouTube Thumbnail Image Generator
Tallaabo 1 : Gali URL URL
Nuqul oo ku dhaji URL-ka YouTube-ka ee duurka ku yaal.
Tallaabo 2 : Guji ❝Hel YouTube thumbnail❞
Si aad u Hesho oo aad u soo dejiso sawirka 'thumbnail YouTube', guji badhanka oranji
Tallaabo 3 : Soo hel Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka YouTube-ka ee YouTube-ka
Ka soo dejiso sawirka thumbnail YouTube-ka oo ah muuqaal tiro badan oo tayo iyo cabir ah
Soo deg deg YouTube Downloader Thumbnail Downloader
Sida aad riixdo batoonka gudbinta kadib dhajinta fiidiyowga fiidiyowga, muuqaal hordhac ah oo ku saabsan dhamaan sawirrada sawir-gacmeedka ayaa la bixin doonaa. Waad hubin kartaa cabirka muuqaalka suulka iyo riix batoonka Download si aad u keydiso Agabyada taxanaha ah ee fiidiyowyada YouTube-ka ee qalabkaaga.
Xulo Cabirka Sawirkaaga Ugu Fiican
Kusoo Qaado Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka ee YouTube-ka ee cabbirro kaladuwan sidii aad door bidayso. Markaad riixdo batoonka Extract, muuqaalka muuqaalka sawirka muuqaalka baaxada leh ayaa la bixiyaa. Waad dooran kartaa cabirka thumbnail inta u dhexeysa 480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 oo soo dejiso.
YouTube Thumbnail Image Extractor waa adeeg khadka tooska ah kuu ogolaanaya inaad dib u fiiriso oo aad kala soo degto sawirada thumbnail-ka YouTube-ka HD. Waxaad ka heli kartaa Sawirka 'Thumbnail' YouTube-ka oo ah masraxa aad ugu jeceshahay sida qalabka Windows, Linux OS, mashiinka Mac, Android, ama iPhone.
Xadka Xadka Xadka
Gabi ahaanba waa adeeg bilaash ah oo khadka tooska ah lagu keydin karo muuqaalka YouTube thumbnail. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad gasho xiriirin iyo Hel Sawirka Muqaalka Sawirka Muuqaalka YouTube-ka daqiiqado gudahood. Intaas waxaa sii dheer, adeegga ayaa ka xor ah xaddidid kasta oo sidoo kale ah. Waa gebi ahaanba barnaamij ku saleysan biraawsar-ku-saleysan waxaana laga heli karaa meel kasta ama aalad.
Halkan Ka hel Su'aalahaaga iyo Jawaabahaaga - Sida loo soo degsado Maqaallada Fiidiyowga YouTube-ka ah?
+ Waa maxay thumbnail?
Thumbnails-ka waxaa sifiican loogu hirgaliyay boggaga internetka si gooni gooni ah, koobiyada yar ee muuqaalka asalka ah, qeyb ahaan maxaa yeelay hal ujeedo sawirka suugaanta bogga websaydhku waa yareynta bandwidth iyo waqtiga soo dejinta.
Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha websaydhku waxay soo saaraan sawir-gacmeedka qoraal HTML ah ama qoraal macmiil-dhinaceed ah kaas oo ka dhigaya adeegsadaha biraawsarka boggiisa sawirka, halkii ay u isticmaali lahaayeen nuqul ka yar sawirka.
+ Ma ka soo saari karaa dhamaan cinwaanada fiidiyowga YouTube-ka ee fiidiyowgayga si qaraar sare ah?
Haa, waad si fudud uga bixi kartaa oo kala soo bixi kartaa dhamaan sawirada fiidiyowgaaga YouTube-ka adiga oo adeegsanaaya adeeggan soo-dejiyaha.
Si fudud u raac talaabooyinka hoose si aad uga soo qaadatid muuqaalka sawir-weyne laga soo qaaday fiidiyowga YouTube-ka:
Fur bogga YouTube Download thumbnail Downloader websaydhka.
Booqo YouTube.com oo Nuqul ka samee xiriiriyaha fiidiyowga YouTube-ka ah
Ku dhaji sanduuqa kuxir bogga fiidiyowga gali YouTube-ka.
Guji batoonka Extract si aad si deg deg ah u qabato dhamaan sawirada fiidiyowgaaga.
Soo dejiyahayaga Fiidiyowga ee YouTube-ka ayaa si deg deg ah u soo bandhigi doona dhammaan waxyaabaha laga soosaaray YouTube-ka ee laga helo Fiidiyowgaaga.
Waxaad si sahlan u-fiirin kartaa dhammaan sawirrada 'Thumnail' oo waxaad ka hubin kartaa cabbirkooda Pixels.
Haddii aad ubaahantahay inaad soo dejiso, markaa waxaad sidoo kale soo degsan kartaa Youtube Video Thumbnails adigoo gujinaya badhanka Download.
Ku raaxayso soosaaridda Tusmooyinka Fiidiyowgaaga ee Video-ga ah.
Waxaad ubaahantahay inaad sameyso wixii ka sareeya talaabooyinka sahlan si aad u badbaadiso sawiradaada YouTube Video Thumbnail.
+ Cabbirkee ayaa waa thumbnail YouTube ah?
Youtube thumbnails fiidiyowyada waxaa laga heli karaa afar tayo iyo cabbirro kaladuwan: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Waxaad ka heli kartaa muuqaal cabir kasta oo muuqaal ah oo fiidiyow ah YouTube ah qaab caadi ah. Kaliya waxaad u baahan tahay Aqoonsi fiidiyow oo u gaar ah, kaas oo lagu arki karo URL-ga fiidiyowga.
Qaabka Sawirka Suulka: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
Waad qeexi kartaa magaca faylka iyada oo kuxiran cabirka thumbnail aad rabto. Qaar ka mid ah waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo ayaa hoos ku taxan:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – Cabbir buuxa
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – Cabbir buuxa
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – Xilliga Dhexdhexaadka ah
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – Xalka Sare
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – Yar
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – Yar
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – Yar
+ Waa maxay ujeeddada YouTube thumbnail Grabber ama Generator?
Ujeeddada ugu weyn ee Isku-xidhka loo yaqaan 'YouTube thumbnail Maker' ayaa ah inaad kala soo bixi karto & Kuu heli karto Sawirrada Sawirka Muuqaalka Muuqaalka ee YouTube-ka ah cabir kasta oo ka jira fiidiyow kasta. Dhamaan sawirradan runtii waa kuwo caawimaad leh howsha dheeriga ah sida qorista qorista, naqshadeynta, ama wadaagida dadka kale.
+ Waa maxay dhammaan xulashooyinka xajmiga ah ee lagu soo dejinayo ama la abuurayo shaashadda muuqaalka firidhsan ee caadiga ah?
Qalabka Soo-saaraha Sawirka 'Thumbnail Image' ee YouTube-ka ayaa bixiya afar xulasho oo xajmi oo kaladuwan ah iyadoo la kaydinayo shaashadda kala-baxa:
+ Waa maxay cabirka YouTube thumbnail 2019?
Sawirka caanka ah ee Youtube-ka waa inuu ahaadaa sida ugu badan ee suuragalka ah, maadaama muuqaalka sidoo kale loo adeegsan doono sidii muuqaalka horudhaca ee ku jira xiddig xiran. Youtube waxay kugula talineysaa suugaanta caadiga ah ee kuu gaarka ah: Hesho qaraar 1280x720 (oo leh ugu yaraan ballac ahaan 640 pixels).
+ Sideen uga soo qaadaa sawir shaashadda fiidiyowga?
Hoogso fiidiyowga meesha aad rabto inaad ku qabsato sawir, adeegso Sawirka Daabacaadda ama Qalabka Snipping si aad u hesho sawirku.
+ Sideed ku aragtaa sawirka suulka ee YouTube-ka?
Dhex dhig url Youtube-kaaga sanduuqa kor ku xusan si aad u hesho dhammaan cabirrada thumbnails-yada.
+ Waa maxay cabirka sawirka daboolka ee YouTube?
Daboolka Muuqaalka YouTube / Sawirka Channel: 2560 x 1440 pixels.
YouTube ayaa cabiri doonta farshaxanka gacankaaga iyadoo la adeegsanayo qaabeynta websaydhka jawaabta. YouTube ayaa kugula talineysa in lagusoo bandhigo farshaxanka kanaalka 2560 x 1440 pixels oo leh ugu badnaan cabir ahaan 2MB ah.
+ Sideen ku heli karaa lambarka xaragada ee thumbnail-ka YouTube-ka?
Waxaa jira wax aad u fudud oo dib loogu soo celin karo sawirrada muuqaalkaaga YouTube-ka ee fiidiyow gaar ah.
Kaliya tag URL-ka soo socda: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Hadda, waxaad u baahan doontaa inaad ka soo qaadato garaafka fiidiyowga midkood midkoodna qaybta fiidiyowga 'Url' ama 'embed code' ee fiidiyaha YouTube.
+ Sideen nuqul uga nuqul ka sameeyaa Youtube?
Kaga soo qaad cinwaankaaga 'Video-ga' ee ka soo baxa youtube kuna dheji sanduuqa kor ku xusan, guji badhanka ❝Hel YouTube thumbnail❞.
+ Waa maxay URL Youtube Youtube oo sax ah?
+ Sidee loo sameeyaa soo dejista thumbnail 1080p?
Xalka ugu badan ee Youtube video thumbnails waa 1280x720.
1080p thumbnails lama heli karo.
Waa inaad isticmaashaa furaha daabacaadda shaashadda ah si aad sawir uhesho.
Saxaafadda Alt + Print Screen.
Moodooyinka qaarkood waxay qori karaan furaha daabacan ee shaashadda ah PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Haddii la isticmaalayo Mac OS X, Saxaafadda Shift + ⌘ + 3
+ Ma aaminbaa in la istcimaalo adeegsiga qadka YouTube-ka ee wax lagu soo dejiyo?
Nabdoonaanta ayaa ah ahmiyadeena koowaad, sidaas oo ay tahay dhammaan taraafikada xogta websaydhkan ayaa ah mid kujira SSL. Nidaamkan shabakadda ee aaminka ah, xogtaada ayaa laga ilaaliyaa marin u helidda dhinac saddexaad. Soo dejinta sawirrada suugaanta dhabta ah ee socda iyada oo loo marayo xiriir toos ah qarsoodi ku ah macaamiisha YouTube-ka.
Aalado waxtar leh
Kudaroo Barta Dheerta Sawirka qadka
Ka hel YouTube Video Screenshot Online khadka tooska ah
Ka qaad shaashadda booska caadada ah
Keydi qoraallada Youtube-ka ee cinwaannada ah
Soo deji caawiye
Waxay kaa caawineysaa inaad deg deg uga soo dejiso fiidiyowyo iyo maqal websaydh kasta (ka saar Youtube)
Maareeyaha Diiwaan Gelinta YouTube
Bedelka midabka ee YouTube
Qari Faalada YouTube
Habka Raadiyaha ee YouTube
Saxeex iyo Amplifier loogu talagalay YouTube
Heeso Cusub Cusub
Sidee Youtube caanka ku ah suugaanta caanka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho aragtiyo badan
Mawaxaad raadineysaa cajaladaha ugu wanaagsan YouTube? Marabtaa inaad hesho dhiirigelin si aad u abuurto naqshad suufkaaga gaarka kuu ah? Adigu waxaad joogtaa meesha saxda ah!
Abuuritaanka thumbnails-ka caadada ah maahan kaliya hab weyn oo kor loogu qaado astaantaada guud ahaan, laakiin sidoo kale waa hab lagu saameyn karo daawadayaasha si ay uga doortaan fiidiyowgaaga dhammaan xulashooyinka la heli karo. Maya, thumbnail caadadiisu ma ka dhigi doonto waxyaabahaaga ka sii fiican sida ay tahay sidaa darteed waa muhiim inaad diiradda saarto abuurista waxyaabo tayo leh - laakiin thumbnail ayaa ka caawin doonta waxyaabahaaga cajiibka ah in la ogaado!
Abuuritaanka thumbnails-yada weyn ee loogu talagalay Fiidiyeyaasha YouTube-ka
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaad dooneysaa in thumbnails-kaaga la sumadeeyo oo la hawl geliyo. Waxaa jira dhawr astaamood oo caan ah oo aan ku aqoonsannay thumbnails-yada YouTube-ka ee hoose.
Ujeeddada Koowaad ama Mawduuca
Erayada Ugu Yar
Marka lagu daro astaamahan kore, waxay sidoo kale cadaatay in abuurista jar-jaryo, ama sawirro daboolan, mowduuca aasaasiga ah ay aad u soo xulan jireen naqshad naqshadeyn loogu talagalay kuwa leh waqtiga, lacagta, shaqaalaha, ama xirfadda lagama maarmaanka u ah in laga saaro.
Waxa Ka dhigaya Muusikada YouTubeka Muhiim
Naqshadeynta sawirrada YouTube-ka aad ayey uga duwan tahay qaabeynta shabakadaha bulshada ama abuurista sawirro xayeysiis oo shabakadda ah. Sabab? Sababtoo ah astaantaadu waxay la tartami doontaa daraasiin noocyo kale ah.
Thumbnail-ka, illaa hadda, waa sheyga soo jiidan kara dareenka adigoon xitaa toos u eegin.
Warka ugufiican ayaa ah inaad marwalba dib ugu laaban karto fiidiyow kasta oo maktabaddaada ah isla markaana aad mustaqbalka cusbooneysiin kartid suul-dhigayaasha mustaqbalka haddii thumbnails-kaaga caanka ah ee YouTube-ka uusan u soo bixin sidii uu ahaa.
Noocyo Dheeri ah oo leh Sawirro fudud
Dhamaan alaabooyinka uma baxaan qaabkooda si ay hal abuur ugu sameystaan ​​naqshadeeyahooda suugaanta YouTube-ka. Xaqiiqdii, inta badan kanaalada waxna kama aysan qaban haba yaraatee - xitaa ma aysan xirin suul la soo qabtay.
Abuuritaanka Naqshadeynta Cajaladahaaga YouTube-ka ah
Wax kale oo loo baahan yahay in laga fiirsado waa weynaanta naqshadaada. Si kale haddii loo dhigo, miyaad raadin doontaa naqshad aad ufirfircoon oo u baahan inaad kaliya iska beddesho taariikh, qoraal, iyo midabbo ama miyaad raacaysaa naqshad u baahan xirfadle sawir si aad u abuurto naqshado cusub?
Naqshadeynta NBA waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan naqshadaha ku meel gaarka ah oo ay fududdahay in la soo saaro. Qof kasta oo leh xirfadaha naqshadaynta asaasiga ah wuxuu si fudud u abuuri karaa shay cusub oo leh waxyaabo la cusbooneysiiyay.
Sida loo sameeyo thumbnail kuu gaar ah oo YouTube ah?
Runtii dhibaato maahan. Haddii aad ogtahay sida loo isticmaalo Photoshop markaa waxaad si fudud ugu samayn kartaa thumbnail fayraska fiidiyowyadaada ama waxaad u adeegsan kartaa qaabkasta oo internetka ah oo YouTube-ka sameeya iyo shaashadda Photoshop.
Muuqaalka suulkaaga caanka ah waa inuu ahaadaa sida ugu macquulsan, maaddaama sawirka sidoo kale loo adeegsan doono sida muuqaalka hore ee sawirka. Xal u hel 1280x720 (oo leh ugu yaraan ballac 640 pixels). Lagu dhejiyo qaab qaab muuqaal ah sida JPG, GIF, BMP, ama PNG.
10 Siyaabood oo lagu kasbado wax badan Youtube
Raac tilmaamahan 10 ama ka badan ee fudud si ay kaaga caawiyaan qiimeynta fiidiyowyada YouTube-kaaga si aad uga hesho aragtiyo iyo doolar badan.
⓵ Waqti ha luminin inaad soo geliso fiidyowyo aan lahayn wax laxiriira kanaalka Youtube ee aad adigu leedahay.
⓶ Magacaabista fiidiyowgaada adiga oo leh cinwaanka ka dibna u geliso YouTube. U qor qeexitaan cajiib ah oo ah 300 oo eray oo loogu talagalay fiidiyahaaga oo ku dhaji cinwaankaaga si qeexan.
⓷ Ku dhaji cinwaanka fiidiyowgaaga sida ay ku qoran tahay sumadaha. Had iyo jeer u isticmaal magacaaga kanaalkaaga sidii sumad. Waxay kaa caawineysaa inaad ku tusto fiidiyahaaga telefishanka ee la soo jeediyay oo ha iloobin inaad kudarto calaamadaha fiidiyowga ee laxiriira laakiin waa inaad u isticmaashaa sharaxaad ka hor intaadan u isticmaalin sumad ahaan. Haddii kale waxay u qaddarin doontaa inay tahay spammeeris.
⓸ Ku dar xiriiriyaasha fiidiyowyada ee sii-deynta iyo bogagga warbaahinta warbaahinta bulshada ku sharraxaan. La wadaag fiidiyowga Twitter-ka ama barta Instagram-ka hashtag iskuna day inaad ku darto mid ka mid ah calaamadaha soo socda sidoo kale.
⓹ Soo hel fiidiyow laxiriira maaliyadaada adiga oo adeegsanaaya calaamadaha Twitterka oo ku dhaji kanaalkaaga isla markaana la wadaag sumad isku mid ah. Markaad tan sameyso waxaa jira fursado badan oo fiidiyowyadaada ay u socdaan viral iyo haddii viral ah markaa waxaad xaqiiqdii kasban doontaa kasbasho badan kana badan soo gelinta fiidiyowyada YouTube-ka. Sidoo kale Ku Wadaag Blogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus iyo Facebook oo leh sumad.
⓺ Ka soo hel fiidiyow isbeddelo ah Isbeddellada Google ee laxiriira kuwaaga hodanka ah isla markaana si sahlan ugu samee fiidiyoow kuna dhejiso kanaalkaaga. Sidan ayaad u samaynaysaa fursado badan fiidiyowgaaga si aad u hesho fayras bulsheed.
⓻ Haddii aad wax ka taqaanid suuq geynta ku xiran markaa waxay kaa caawin kartaa inaad ka hesho doolar badan kanaalkaaga. Xullo shey saxan oo laxiriira meheraddaada oo samee muuqaal fiidiyow ah isla markaana gal. Ka dib markaad geliso ku dhaji xiriiriyahaaga xiriirinta khadka koowaad ee sharraxaadda sidaas darteed haddii qof sameeyo hamigiisa inay iibsadaan alaabadaada markaas isagu / iyadu way raaci karaan xiriirikaaga si ay u iibsadaan. Marka xiriirku runti waa hab fiican oo lagu kasbado wax badan.
⓼ Xoogga saar tayada aan tirada lahayn oo adeegso ereyga muhiimka ah ee 'Cpc keywords'. Raac tilmaamahan fudud si aad kor ugu qaaddo aragtidaada kanaalkaaga oo runtii kaa caawin doona inaad kasbato wax badan kana badan YouTube.
⓽ U bartilmaameedsada waddamada sarsare inay lahaadaan heerar wanaagsan oo cpc ah oo ay ku helaan erayga sare ee cpc.
⓾ Muuqaalka sawirkaaga Youtube-ka ayaa caado ka dhigtay sawirkaaga si dadku ay u arkaan wax xiiso leh. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo suugaanta YouTube ee caanka ah markaa waxaad si fudud uga koobi kartaa kartaa fiidiyeyaashaas xiisaha leh ee la xiriira fiidiyahaaga. Suugta xiisaha lihi waxay had iyo jeer xiiseeyaan dadka oo ku qasbeysa inay daawadaan muuqaalkaas. Markaa maskaxda ku hay.
Kaydso youtube iyo sawirro vimeo sawir hoose oo tayo leh oo bilaash ah. Codsigan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso tigidhada dhammaan tayada. Kaliya ku dhaji URL-ka fiidiyowga thumbnail-galka hoosta ku yaal oo guji Hel Sawirka Suulka
Naqshadaha ugu Fiican ee YouTube-ka - Badbaadi Youtube Video-yada ድንdooyinka
Soo dejiso muuqaal bilaash ah oo fiidiyowyo ah youtube-ka sawir buuxa ah oo ah Full HD (1080), HD (720), SD, iyo waliba cabir yar. hada waxaa lagu taageeraa qaabab: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
Xuquuqda daabacaadda © 2019
Muuji taageeradaada oo la wadaag websaydhkan:
Waxaan u adeegsaday adeeggan soo-degidda thumbnail si aan ugu sameeyo shaashad iskudhiska mashruuceyda soo socota. Waqtiga badbaadiyaha noocan oo kale ah, waxay u badan tahay inuu i badbaadin doono saacado badan oo waqtiga oo dhan ah oo si fiican u shaqeeya